AZA MANAO ORY HAVA-MANANA
Mahavariana ny mandinika ny fisainan-tsika Malagasy ;
Lany andro mifanenjika, amin'ny zava-maro miseho.
Mifampikapa ranjo foana, mifampively vody basy ;
Avy eo samy potika, torotoro, ny tontolo mankaleo.
Raha vao teratany no mioitra, manana sy misongadina ;
Dia enjehina, aratsiana, lotoina isan'andro vaky izao.
Amin'izay potraka amin'ny tany, rehefa vita ireo hadina ;
Noho ny atsanga tsy aman'orana, mahafeno tabilao.
Ny fiariana izay vita, lazaina risoriso sy halatra daholo.
Ny fananana mitsangana, azo tamin'ny fanambakana.
Ny ezaka andresena lahatra, lazaina fanaovana bontolo.
Raha vao mihetsika, atao izay aharendrika ny lakana.
Raha vahiny, na vahiny teratany, anefa no mpanefoefo ;
Dia ekena marindrano, satria izay no lalànan'ny natiora.
Tsy misy ny manelingelina, na ireo mpanana na marefo.
Ny zava-misy aza, misy mankasitraka, manatitra miora.
Marina, ekena, misy ny nangorona harena tsy hita fototra ;
Fa tsy atao anaty sobika iray daholo, ireo Gasy manana.
Ary tsy tokony ho aratsiana, na enjehina, mba hidofotra.
Raha izay, very ny Firenena, ary very koa ny namana.
Raha izany foana ny fisainana, tsy hisy ny fandrosoana.
Toy ny "ory hava-manana", mifampisintona foana midina ;
Fa tsy mifandrisika hiakatra, ho hita daholo eo anoloana,
Mba tsy hisy tavela, satria natsangana ireo nitsingidina.
Hafatra kely fotsiny atsipy, ho an'ny Gasy manana na tafita,
Fadio re ny milanjalanja orona, sy koa ny miavonavona ;
Satria raha izay no miseho, ho ratsy daholo ireo zava- bita.
Dia lasa manamora ny fihetsika, valala mifanipaka an-karona.
Ilaina ny fiovan'ny toe-tsaina, raha tiana ny handroso.
Trano atsimo sy avaratra, izay tsy mahalena ialofana.
Mifanampy sy mifanohana, mba tsy hisy ho lasa androso ;
Satria vary sy rano, ka ny lembalemba misy, ho totofana.
RAS AMINDRAKOTROKA Andry Tiana
Sokajy : fananarana, fiainana, Fiaraha-monina, Tanindrazana, Tontolo iainana
Date de dernière mise à jour : Ven 21 juin 2019